Ny aretin-koditra fotsy dia iray amin'ireo karazana aretina voalohany nokarakaraina tany Karaiba, anisan'izany ny Florida Keys sy Bahamas. Sary © Craig Quirolo / Reef Relief / Marine Photobank
Ny aretina dia voasokajy ho toy ny fahasimban'ny asa, rafitra, na taova. Ny aretina dia lafiny ara-boajanahary eo amin'ny mponina sy ny haran-koditra ary fomba iray ahafahana mijery ny isa maromaro. Ny aretina dia ahitana fifamatorana eo amin'ny mpikarakara ny haran-dranomasina, ny rajako, ary ny tontolo iainana.
Ny aretina azo avy amin'ny bakteria dia mety ho vokatry ny bakteria, virosy, protozoa, na holatra, ary mety miteraka fiovana manan-danja eo amin'ny fanenana, ny tahan'ny fitomboana, ny fiaraha-monina, ny karazana fahasamihafany, ary ny habetsahan'ny orinasan'ny haran-dranomasina. ref
Ny aretina ao amin'ny Coral dia nitombo ny habetsahan'ny fahamaroan'ny olona, ​​ny hafanam-po ary ny faritra nandritra ireo taona maro lasa. Ny mpahay siansa dia tsy mahalala raha ny fiposahan'ny aretina dia noho ny fampidirana ireo taolam-paty novonoina na noho ny fiovan'ny taovam-pananahana mety hitranga vokatry ny fihenan'ny fiantraikany amin'ny tontolo iainana sy / na ny fanoherana ny toetr'andro. Fantatry ny mpahay siansa anefa fa voan'ny aretina mitaiza ny fahasimban'ny rivo-doza, coral bleaching, ary ny tsindry hafa dia miteraka ny isan'ny maty amam-bozaka.
Maro ny aretina azo avy amin'ny haran-dranomasina no tsy voamarina tsara ary mbola tsy fantatra hatramin'izao ireo mpitsabo marary maro. Mbola fikarohana fikarohana mazoto izany. Understanding the antony (anisan'izany ireo mpamily fiara sy fomba fiasa) ary fiantraikan'ny Ny marary momba ny haran-dranomasina dia tena ilaina mba hanampiana ireo mpitantana hahatakatra ny fomba fitantanana ny fitantanana ny vatohara amin'izao fotoana izao sy ny fiantraikan'ny olombelona amin'ny fiantraikan'ny fihanaky ny aretina, ary ny fanapahan-kevitry ny fitantanana informatika. Ny fitomboan'ny aretina amin'ny haran-dranomasina dia manolotra olana lehibe amin'ny mpitantana ny vatohara ho an'ny haran-dranomasina sy ny mpitantana ny tontolo iainana an-dranomasina tropikaly.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoAretina amin'ny toetr'andro Tropical Coral Reef: Hafatra fototra ICRI momba ny aretina mikraobamanokatra fisie PDF
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoCoral Aretina ary Consortium Health
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNy Hawai'i's Rapid Response Planmanokatra fisie PDF